दाँतको बीचमा खाली ठाउँ छ? त्यसैले बुझ्नुहोस् कि तपाई धेरै भाग्यशाली हुनुहुन्छ, जान्नुहोस् तपाईमा के गुणहरू छन् « गोर्खाली खबर डटकम
जसरी हामी सबैलाई यो राम्ररी थाहा छ, संसारमा हरेक व्यक्तिको स्वभाव फरक हुन्छ र यसको साथमा, उनको अनुहारको बनावट पनि धेरै फरक हुन्छ। तर यदि हामी मानव दाँतको कुरा गर्छौं भने, दाँतको बनावट पनि प्रत्येक व्यक्तिको फरक कोणमा देखिन्छ।
खैर, सुन्दरतामा दाँतको ठूलो भूमिका हुन्छ। यदि त्यहाँ दाँत छैन वा तिनीहरू नराम्रो छन् भने, सबैभन्दा सुन्दर व्यक्तिले पनि आफ्नो आकर्षण गुमाउँछ। यही कारणले गर्दा मानिसहरु आफ्नो दाँतको सुन्दरता र चमक कायम राख्न हरसम्भव प्रयास गरिरहेका हुन्छन् ।
प्रायः तपाईंले देख्नु भएको होला कि कसैको दाँत ठूला हुन्छ र कसैको सानो दाँत हुन्छ। दाँतको बिचमा ठ्याक्कै खाडल नहुँदा पनि दाँतको बीचमा अन्तर हुन्छ । सामुद्रिक शास्त्रमा दाँतको माध्यमबाट मानिसको स्वभाव र भविष्य थाहा पाउने तरिका बताईएको छ । यसमा दाँत बिचको ग्यापको बारेमा महत्वपूर्ण कुराहरु बताईएको छ ।
सामुद्रिक शास्त्र अनुसार दाँत बिचको खाडल शुभ कि अशुभ ?
सामुद्रिक शास्त्र वा समुद्र शास्त्रमा उल्लेख गरिएको छ कि यदि कुनै व्यक्तिको दाँतको बीचमा खाल्डो छ भने त्यसलाई भाग्यशाली हुने संकेत मानिन्छ। दाँतमा ग्याप हुँदा अनुहारको सौन्दर्यमा ह्रास आउने भएता पनि जसको दाँतमा ग्याप हुन्छ, उनीहरुलाई भाग्यको पूर्ण साथ मिल्छ ।
थाहा पाउन सजिलो तरिका
1. सामुद्रिक शास्त्रका अनुसार यदि कुनै व्यक्तिको दाँतको बीचमा ग्याप छ भने त्यो व्यक्ति धेरै बुद्धिमान र प्रतिभाशाली हुन्छ। यी व्यक्तिहरूले आफ्नो जीवनमा धेरै सफलता प्राप्त गर्छन्। यति मात्र होइन, यी व्यक्तिहरू अरूलाई मद्दत गर्न सधैं अगाडि हुन्छन्।
२. नौकरी गर्ने व्यक्तिको दाँतको बीचमा खाडल छ भने त्यसलाई धेरै शुभ मानिन्छ। यी व्यक्तिहरूले आफ्नो क्षेत्रमा उच्च पद प्राप्त गर्छन्।
3. दाँतको बीचमा ग्याप हुने मानिसहरूलाई धेरै खुल्ला दिमागको मानिन्छ। यस्ता मानिसहरू सधैं अर्थपूर्ण कुरा गर्छन्। यति मात्र होइन, यी मानिसहरू सधैं अरूलाई छिटो माफ गर्नमा विश्वास गर्छन्।
4. समुद्र शास्त्रका अनुसार जुन मानिसको दाँतमा ग्याप हुन्छ, त्यस्ता व्यक्तिलाई धेरै साहसी मानिन्छ। दाँतमा ग्याप हुनु भनेको व्यक्तिले हिम्मत नहारेको जनाउँछ। यी मानिसहरू अन्तसम्म खडा हुन्छन्। यस्ता व्यक्तिहरुको सोचलाई निकै सकारात्मक मानिन्छ ।
5. दाँतको बीचमा खाडल हुने मानिसहरूको बारेमा सामुद्रिक शास्त्रमा भनिएको छ कि यी मानिसहरू विभिन्न प्रकारका परिकार खान मन पराउँछन्।
6. सामुद्रिक शास्त्रका अनुसार दाँतको बीचमा खाडल हुने मानिसहरूले आफ्नो आर्थिक मामिलामा धेरै बुद्धिमानीपूर्वक व्यवहार गर्छन्। जसका कारण उनी आर्थिक रुपमा सधैं बलियो रहन्छन् । यी मानिसहरू आफ्नो कडा परिश्रमबाट पैसा कमाउँछन् र आफ्नो मेहनतले कमाएको पैसा बुद्धिमानीपूर्वक खर्च गर्छन्।
एक चीन नीति खारेज गर्दै स्वतन्त्र ताइवानलाई मान्यदा दिनुपर्ने विधेयकमा २० सांसदको समर्थन
४ वटा बिस्कुट पाएपछि ‘उनको अनुहारमा देखिएको मुस्कान : अमूल्य छ आहार’ !